baaq ku wajahan dagaalka soo noqnoqdey ee koonfurta Sool ee Somaliland |
baaq ku wajahan dagaalka soo noqnoqdey ee koonfurta Sool ee Somaliland
Tixraac: SSE/DK- 079/27102018
Baaq nabadeed oo ku wajahan muwaadiniinta ku dagaalamaya Koonfurta Sool
Ku: Dhammaan Goleyaasha Xukuummadda Ku: Xisbiyada Qaranka Ku: Salaadiinta, Cuqaasha, Wax-garadka iyo Shicibka Soomaaliland
Dallada kulmisa jaaliyadaha iyo ururada Somaliland ee Yurub (SSE) ayaa waxa aay baaaqan kooban ku muujinaysaa dareenka naxdinta leh ee ka dhashay khilaafka iyo dirirta markale ka soo cusboonaatay deegaanka koonfurta Sool.
Waa arrin tiiraanyo iyo murugo leh in muwaadiniin reer Somaliland ahi wakhti kooban ay naftooda si sahlan ugu waayaan dagaalka markale ka soo cusboonaaday deegaanka. Dagaalkani waa musiibo dad badani ay ku dhinteen, qaar badana ay laxaadkooda qaaliga ah ku waayeen. Dallada SSE waxay sida guud tacsi ugu soo direysaa shacabka reer Somaliland si gaarana qoysaska iyo asxaabta ay ka baxeen muwaadiniinta naftooda ku waayay dagaalka iyo khilaafka Koonfurta Sool.
Dallad ahaan waan hubnaa inaad nala ogsoontihiin in wixii nabad iyo is-afgarad lagu xallin waayo in aan dagaal, xasarad iyo qori caaradii lagu xallin karin. Caqliga toosani marnaba ma oggolaanayo colaadda noocan oo kale ah oo tiro intaa leeg uu muwaadiniin ahi ay si sibiq ah naftooda ugu waayeen in badana ay dhaawac la jiifaan.
Dalladu iyada oo ogsoon dedaalka xukuumadda ayaa haddana waxa naga xasuusin ah in aan la aqbali Karin dagaalka noocan oo kale ah oo aafo ku ah dadka iyo dalka reer Somaliland. Waa in halka ugu adag laga is-taago oo aan marnaba fursad la siin kuwa ka dhanka ah nabada iyo xasiloonida. Xukuumadda uu hogaanka u yahay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa aanu si xushmadki ku jirto uga codsanaynaa in dagaalka Koonfurta Sool la siiyo mudnaanta koowaad oo culeys, awood iyo awood la isugu geeyo sidii nabad kama dambeys ah looga dhalin lahaa degaankaa, loona soo afjari lahaa khilaafka iyo kala fogaanshaha ay colaadani keentay qiimaha ay doonto ha inagu kacdee. Ma aha wax la aqbali karo in muwaadiniin reer Somaliland ahi ay dhiigooda xalaashadaan oo karaamada iyo xushmada Ilaahay siiyay qofka muslimka ah si sahlan loogu xad gudbo.
Guud ahaan Golayaasha kale ee xukuumadda iyo Xisbiyada Qaranka ayaanu iyagana ka codsanaynaa inay xukuumadda ku garab istaagaan sidii xal kama dambeys ah loogu heli lahaa xalinta dagaalka koonfurta Sool oo werwer iyo naxdin joogto ah inagu wada haya.
Waxa iyaduna muhiim ah in Salaadiinta, Cuqaasha, Culimada iyo wax garadka reer Somaliland ay doorkooda muhiimka ah ciyaaraan oo ay xukuumadda iyo maamulka Gobolka Sool ku garab istaagaan sidii xal waara looga gaadhi lahaa musiibada uu dagaalkani la yimid.
Gunaanad ahaan Ilaahay ayaynu ka baryaynaa inuu ina garansiiyo xaqa iyo wanaaga ay nabadu leedahay. Dallada SSE waxay ugu dambeyn kula dardaarmaysaa dadweyna qaaliga inagu ah ee Koonfurta Sool, gaar ahaana labada beelood ee colaadu u dhaxayso in nabada iyo samaha la ogolaado oo loo tudho danta deegaanka iyo ta guud ee dalka iyo dadka reer Somaliland.